Momba anay | Hebei Meihe Paint Co., Ltd.
Hebei Meihe Paint Co., Ltd dia naorina tamin'ny taona 2010, orinasa teknolojia avo lenta hamokatra sy fanadihadiana momba ny vokatra miaro vovoka maina vovoka azo avy amin'ny tontolo iainana.
Ny ekipa orinasa R&D dia tarihin'ny Dr. Scientia Jiaan Yang. Noho ny fahaizana manokana momba ny fikarohana momba ny molekiola, ny Dr. Yang dia nahomby tamin'ny famolavolana ny nano coating namorona accelerator tany Etazonia, ary avy eo dia nitarika ny ekipa mpikaroka namorona ny loko vovoka Heshida. Ity fitaovana coating maoderina amin'ny fananganana herinaratra dia vokatra mahafinaritra amin'ny tontolo iainana izay napetraka tsara sy ny fanoherana ny toetrandro ho an'ny haingo anatiny.
Tamin'ny alalàn'ny fitsapana ofisialy nataon'ny Ivotoerana Nasionaly National Building fitaovana, ny hosodoko vovoka Heshida dia misy ny VOC, zero formaldehyde, andiany enina benzene ary metaly mavesatra izay tena lasa vokatra hosodoko tsy misy loto. Ary koa, hosodoko vovoka Heshida dia manana fahaizana mihoatra ny dimampolo arivo mahery amin'ny fanoherana ny fikororohana.
Heshida loko vovoka maina dia vokatra coating coable amin'ny tontolo iainana amin'ny zon'ny fananana ara-tsaina mahaleo tena. Maro ny manampahaizana nilaza fa "revolisiona teknolojia maoderina ho an'ny fandrosoana ny tantaran'ny fandrosoana indostria tao anatin'ny 60 taona mahery, dia hitarika ny indostrian'ny sary hosodoko izao niditra tamin'ny vanim-potoana feno loto."
Tamin'ny volana septambra 2012, nandoko «pain» ny vovo-doko Heshida dia nandalo "fanadinana teknika nasionaly ho an'ny vokatra vaovao" tany Beijing, izay lasa fitaovana fandokoana vovoka maina voalohany; ny voalohany amin'ny alàlan'ny "takila-by teknika nasionaly ho an'ny vokatra vaovao"; ny fitaovana fanoratana rindrina anatiny sy ivelany voalohany tsy misy VOC, formaldehyde, andiany benzene, metaly mavesatra ary mameno ny banga amin'ity indostrian-trano ity.
Tamin'ny volana Oktobra 2014, nomena loko hosodoko ny vovoka Heshida miaraka amin'ny fanamarinana «Ny vokatra vaovao nasionaly», izay navoakan'ny sampana «People of the Republic of China Science and Technology», ny Minisiteran'ny fiarovana ny tontolo iainana, ny minisitry ny varotra, ny Sampana miadidy ny varotra, ny fanaraha-maso ny kalitao. Administration
Tamin'ny volana Desambra 2014, ny volavolan-tsodiky ny vovoka maina eo an-toerana ho an'ny rindrina anatiny sy ivelany an'ny faritany Hebei dia novolavolain'ny Meihe Paint Co, Ltd, izay nankatoavin'ny hetsiky ny faritany Hebei ary ny Birao Fanaraha-maso ny Teknolojia. Amin'izao fotoana izao, ny orinasa dia mamolavola ny fenitra nasionaly ny sary miloko emulsion maina ho an'ny rindrina anatiny sy ivelany.
Tamin'ny Novambra 2016, Hebei Meihe Paint Co., Ltd dia nomena tamim-pahamarinana "orinasa ambony sy teknolojia vaovao" navoakan'ny Departemantan'ny siansa sy teknolojia Hebei, departemantam-bolam-panjakana Hebei, biraon'ny hetra nasionalin'i Hebei ary birao hetra hetra any an-toerana.
Manana orinasa pataloha famoronana efatra ity orinasa ity, patantitra endrika telo ary patanty fampiharana vaovao enina.
Ny hosotra vovoka Heshida dia azo ampiharina amin'ny sary anatiny sy ivelany, sary hoso-doko amin'ny zavakanto, fiarovana amin'ny tany sns. Ity vokatra ity dia nampiharina tamin'ny karazan-trano, trano, birao, trano fivarotana, orinasa, hopitaly, sekoly ary toerana maro ho an'ny besinimaro. . Heshida loko vovoka maina dia tsy ampiasaina ho an'ny fanamboarana trano vaovao, ary azo ampiasaina amin'ny fanavaozana ny trano. Izany dia manao fisavana raha vao vita ny hosodoko. Heshida loko vovoka maina dia tsy miaro ny fahasalamana ho an'ny mpiasa coating ihany, fa manome tontolo salama tsy mendrika ihany koa ahafahan'ny olona miasa sy miaina. Noho ny hetsika maintso sy miaro ny tontolo iainana, ny fampisehoana tsara sy ny vidiny mendrika, ny loko hosotra Heshida maina dia nahazo fiderana be dia be avy amin'ireo mpampiasa sy mpanjifa.
Hatreto, Hebei Meihe Paint Co., Ltd, dia nanorina ny fiaraha-miasa amin'ny orinasan-trano sy vondron'olona an-trano sy andrim-panjakana ary nanangana ny "Powder Painting Laboratory" sy ny "National Green Paint Industrial Park" any Chine. Hanohy ny hampiroborobo ny iraka miaraka amina karbonika, mpamonjy angovo, vokatra mahasoa sy mahasalama ny tontolo iainana, ary manao ny fandraisana anjara mba hanatsarana ny tontolo ao Sina.
Shinoa AAA tokana fahatokisana marika
Marika maintsin'ny Indostria fanorenana Shinoa
National Certificate New Products Certificate
Mpamatsy voatokana ihany
Fanamarinana Rafitra fitantanana tontolo iainana ISO9001
Fanamarinana ny rafitra momba ny tontolo iainana ISO14001
Fanamarinana ny rafitra momba ny tontolo iainana OHSAS18001
Taratasy fanamarinana kalitao momba ny vokatra
Ny vokatra sy ny teknolojia vaovao dia mitondra fiainana vaovao misy fahasalaman'ny rehetra!
Heshida dia manaja ny toetra sy ny fiainana !!!